Muxuu ka yiri Lacazette tababare Mikel Arteta kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Fulham?? – Gool FM
Muxuu ka yiri Lacazette tababare Mikel Arteta kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Fulham??
Dajiye September 13, 2020
(London) 13 Sebt 2020. Weeraryahanka Arsenal ee Alexandre Lacazette, ayaa sharaxaad ka bixiyay in tababaraha reer Spain ee Mikel Arteta uu doonayo in Gunners ay noqoto kooxda dhameystiran.
Arsenal ayaa guul ay u qalantay kaga furatay kulankeeda ugu horeeyay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan 2020-21, kaddib markii ay kaga soo adkaatay kooxda Fulham oo ay marti ugu noqotay garoonka Craven Cottage 0-3.
Alexandre Lacazette ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Arsenal wuxuu ku sheegay:
“Waxa ay aheyd sida ugu fiican ee aan ku bilaabano xilli ciyaareedka, waxaan dooneynay inaan guuleysano maanta oo aan ka baxno ciyaarta shabaqeena oo nadiif ah”.
“Difaac ahaan, waxaan u maleynayaa inaan sameynay waxyaabo wanaagsan oo aan ixtiraamnay waxa uu tababaruhu doonayay, ugu dambeyn, waan guuleysanay sidaa darteed qof walba maanta waa uu faraxsan yahay”.
“Arteta wuxuu doonayaa inaan noqono koox dhameystiran, waxaan in badan u shaqeynaa Isbuucii, kulanka noocan ah, sababtoo ah waan ognahay inay runtii muhiim u tahay xilli ciyaareedka”.
“Waxaan dooneynaa inaan noqono kuwo bahalo ah markaan kubadda heysano iyo markaan heysanba, waxaan kaliya dooneynaa inaan horumarino dhinac kasta oo qaab ciyaareedkeena ah waana sababta aan u shaqeyno maalin kasta, isbuuc kasta, si aan u noqono kuwo fiican”.
Koeman oo ammaanay labo xiddig ka tirsan Barcelona kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Gimnàstic
De Bruyne oo fariin digniin ah u diray kooxda difaacaneysa Premier League-ga ee Liverpool